Madaxda Puntland oo maamuus u sameeyey xulka kubadda cagta. – Radio Daljir
Luulyo 31, 2016 10:23 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu weheliyo Madaxweyne ku-xigeenka Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa caawa 31 July, 2016 casho sharaf soo dhoweyn iyo dhiirri gelin isugu jira Hotel Jubba ee magaalada Garoowe ugu sameeyey xulka kubbadda cagta Puntland.
Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirro, Xildhibaano, xiriirka kubbadda cagta Puntland, kooxaha fanka Puntland oo ay ka mid yihiin kooxda Mahuraan Band iyo Kaah Star oo madasha kusoo bandhigay heeso ay gundhig uga dhigeen dhiirri gelinta ciyaaraha iyo qiimaha waddaniyadda.
Madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo madasha cashada hadal ka jeediyey ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha ay kooxdaani u soo hooyeen Puntland isla markaana waxa uu ku boorriyey in ay dedaalkooda sii wadaan.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ammaan iyo bogaadin u diray xulka kubbadda cagta Puntland, waxaana uu ku tilmaamay in ay yihiin halyeeyo aan la illoobi doonin, sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu ammaanay Wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo qayb weyn ka ahayd guushaan ay gaareen xulka Puntland, waxaana uu Madaxweynuhu si gaar ah u carra-baabay Agaasimaha guud ee wasaaradda Dhallinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabddalla Tigaana oo Madaxweynuhu uu ku tilmaamay shaqsi ma- daale ah.
Ugu dambayn Madaxweynuhu waxa uu xusay in ay dawladda Puntland abaal marin doonto xulka kubbadda oo Puntland u soo hooyey sharaf iyo karaamo isla markaana noqday xiddigo aan ka bixi doonin quluubta shacabka Puntland.